Olee otú Idozi ihe inflatable Water Slide: The anọ Kasị Common Nsogbu - China Shanghai Mutong
Olee otú Idozi ihe inflatable Water Slide: The anọ Kasị Common Nsogbu
Children arịgo Ọdịdị
Inflatable mmiri slide na-ewu ewu nnọọ na ọ bụrụ na ị na-kechioma aka onye ị maara ihe mere. Ị na-na-nri ebe ọ bụrụ na ị na-achọ Ama na otú ndozi ihe inflatable mmiri slide. Banzai Falls-eme ka otu n'ime ndị kasị ghọtara ụdị dị na otu onye nke kasị mma n'ire. Dị mwute ikwu na ha na-iyi ka otu n'ime ndị kasị mfịna slide kwa.
E nwere ụfọdụ ndị di na ndị mfe idozi na ụfọdụ na-agaghị niile olileanya. M ga-ekpuchi anọ kasị nsogbu na otú ị pụrụ elekọta ha onwe gị na ịzọpụta ihe bụ ma eleghị anya onye nke gị na na ọkacha mmasị ụmụaka.
1. akpụzi: Ọfọn okpomọkụ dị ebe a ọzọ na na na mbụ na-ekpo ọkụ ụbọchị gị na na na-arịọ maka mmiri slide na ị itopusi ya si nchekwa na-ahụ na ọ bụ ihe niile moldi. Ebu bụ unsightly na ike ịbụ a-ekwe omume ahụ ike odachi ma mgbe ụfọdụ ma ọ bụrụ na ọ bụ adịghị oke ọtụtụ i nwere ike tufuo ya. Malite site na-a leaner na bụ nchebe maka polyester kwaaji M ga-ikwu Aurora Boat Clean Plus. Nwere ike ị chọrọ tụlee saa gị inflatable otu ugboro n'afọ na-enyere na-dị ọcha.
2. adọka ma ọ bụ mgbapu na Fabric: N'agbanyeghị otú lezie anya ị na-na gị inflatable mmiri slidea dọkatụrụ adọka ma ọ bụ mgbapu-eme eme. Ike ị gaghị achọpụta ya ruo mgbe ị ibugo onu na slide na mara na bụ bụ n'okpuru ebu ma ọ bụ na inflating na niile. Ọ bụrụ na a na-eme ka ị ga-amalite ichu nta n'ihi na dọkatụrụ adọka na ákwà.
Ọ bụrụ na gị na slide agaghị ibugo onu na niile mmebi nwere ike ọtụtụ zuru ezu na ị nwere ike mfe ịhụ ya. Ọ bụrụ na gị na slide na-ubé obere inflated ikekwe ọ pụtara na dọkatụrụ adọka bụ obere na nwere ike isi ike ịchọta. A atọ na-eme ka a mfe bụ ibugo onu na slide na squirt ya a ịgba karama jupụtara a ngwakọta nke efere ncha na mmiri. Ọ bụrụ na ị nwere a-ehi ehi na-agbapụ ikuku kwesịrị ime ka ngwakọta na afụ na i nwere ike ịmata ihe bụ isi iyi nke gị nsogbu. Ozugbo ị chọta ihihi nwere ike ị chọrọ ka ịlele ọzọ nke slide iji jide n'aka na ọ dịghị ihe karịrị otu.
Ịrụzi a rip ma ọ dọkatụrụ adọka na ákwà ị na-amalite site na akwa akwa elu oghere nke a bụ iji gbochie ya na-ibu. Ozugbo ị na-dụkọta ya ị ga-mkpa ụfọdụ nyagide na a mpempe ihe n'ihi na a kwachie. Ị nwere ike ịzụta a kwaaji idozi kit si fọrọ nke nta n'ebe ọ bụla na-ere maa ụlọikwuu na ngwá na ha kwesịrị inwe ha maka idozi ikwū.
Na-eso ntụziaka ndị na-abịa na kit nnọọ jide n'aka na ị na-eji a kwachie nnukwu iji na-ekpuchi dum rip. Ọ bụrụ na ndị patch ihe na-adịghị nnukwu zuru ezu na ị nwere ike iji ihe karịrị otu ụzọ dị nnọọ jide n'aka na ị yitewere na seams site banyere 1 inch.
3. ekewa seams: nwute ma ọ bụrụ na gị na slide na-abịa iche na seams i nwere hardest ụdị idozi ime. Ọtụtụ n'ime oge ụdị mmebi pụrụ ịbụ na ọtụtụ idozi ma ebe ndị a na-asọ asọ na-oké ọnụ eleghị anya ị chọrọ inye ya a shot. Ị na-aga na-agbaso otu nzọụkwụ dị ka ịrụzi a onu.
Malite site akwa akwa na onuete elu, ijide n'aka na-aga a obere gabiga ebe gbawara n'etiti akwụsị. Mgbe ahụ a na-eme ị na-aga ikwu na patch ihe onwunwe. Mgbe ahụ gafee na mkpịsị aka gị na-eme ka ikuku mmiri na ọ bụrụ na ndị slide esetịpụ ikuku wee nye onwe gị a kutu aka na azụ.
4. A na-ezughị oke ma ọ bụ Broken ikuku mmiri: Ọ bụrụ na ndị ikuku mmiri unit ọjọọ ọ gwụla ma ị nwere ahụmahụ na eletriki moto Ndozi mgbe ahụ i kwesịrị n'ezie dochie ya. Ị nwere ike ịzụta nnọchi blowers na eBay maka n'ebe ọ bụla si $ 50 - $ 200 dabere na ụdị na ọnọdụ. Ị ga mkpa ka dakọtara ikuku mmiri size na ume na onye i nwere maka na ọ na-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi.
Banzai Falls bụghị naanị onye nke inflatable mmiri slide e nwere ndị ọzọ ụdị dị ka Blast Mpaghara na Bounceland nke m na uche na-enye a elu mma ngwaahịa. Banzai yiri ka nwere ọtụtụ nsogbu na-anwụ ngwa ngwa nke na-eduga ọtụtụ ndị na-achọ ntụziaka banyere otú ha. M na-atụ gị na-enwe ike ịrụzi gị slide ma ọ bụrụ na ọ chọpụta ụfọdụ nke ndị ọzọ na ụdị.
Olee otú Idozi ihe inflatable Water Slide: The anọ Kasị Common Nsogbu njikọ Video: